Isixazululo sokuKhanyiswa kokuKhanyiswa okuKhanyisiweyo kunye noMvelisi wokuKhanyisa kwePendant | Isibane sika-Huayi
Isisombululo sokuKhanyiswa komhlaba
Ukwakha iZisombululo zeZibane
Isisombululo sokuKhanyisela isiko
Ukukhanya okusempilweni ngobomi obungcono
Wasekwa ngo-1986, esikwidolophu yaseGuzheen eZhongshan City, i "Capika" eKhanyisiweyo "ye China.
I-R&D, ukuvelisa kunye nentengiso yeemveliso zokukhanyisa kunye nezinye iimveliso ezinxulumene noko
Isibane sasemini ebusuku
Uyilo lwemodeli ye-penguin.
Isibane sokufunda esikhokelayo
Iphaneli ye-Tough yeThemba
Imfashini yefashoni engaphantsi
Isibane se-LED ye-LED
Uyilo lwemodeli yokulinganisa
I-Huiayi ihlala iFila
I-rand yophawu olukhulu ukusukela ngo-1986, ukukhanya kwe-Huiayi kunomdla wokukhokela ishishini lokukhanyisa kwimithombo yeendaba ezahlukeneyo. Nokuba ngaba uluhlu olupheleleyo lwangaphakathi& Imveliso engaphandle, okanye igumbi lokubonisa le-7 le-7000, okanye ngaphezulu kwe-200000 ivelisa iziko lezixhobo zekhibhodi, silandele, siza kukubonisa uhambo oluhle lokwazi malunga neHuiyi. Kuya kubanjelwa i-AliBaba yeHlabathi kunye nezinye iiMedias zentlalo zokubonisa i-Huiyi Hlobe& Amagqabantshintshi bomzi-mveliso kunye nokufika ezintsha zorhwebo, ukuhombisa& Iimveliso ezikhanyayo,Ukukhanya kweMizi-mveliso, Isibane semizi-mveliso, ukukhanya kwesitayile sanamhlanje, ukukhanya kweglasi yeglasi,Ukukhanya okuqhelekileyo, umgangatho onokuthenjwa kwaye uthembekile.
Wamkele ingqalelo yakho eqhubekayo. Iindlela ezininzi zikulinde ...
I-AliBaba / Facebook / Klum / Klum / YouTube: I-HUAYILIIMS
I-Kempinski Ihotele eDubai edibanisa iivenkile ezinkulu zeEmiras, amagumbi ehotele anomhombiso obutofotofo ifakwe kwigumbi lokuhlambela lemabhile, isikrini esikhulu seTV yeTV kunye nendawo yokutyela. Amanye amagumbi anokujonga kwilali yaseDubai Ski.
I-India-Le Méridien Ihotele
Ihotele iLe Méridien ibhengeza lo mhambi unomdla wokuyila noyena mntu unomdla wokuyila amava angalindelekanga nanomdla kwindawo ekuyiwa kuyo. Esekwe kubudala begolide bokuhamba, iLe Méridien ihlala iyindawo yokuhlanganisana yabantu ukuba bonwabe ekufumanekeni kweendawo kwihlabathi liphela. Ezona ntengiso zintle ehlabathini ezinemivuzo engcono nangakumbi.
Isixeko saseIndiya-Phoenix Market City
Isitalato i-High Street iPhoenix, eyayisaziwa njenge-Phoenix Mills, yenye yezona ndawo zinkulu zokuthenga e-India, ebekwe e-Lower Parel, e-Mumbai. Umgangatho wayo opheleleyo ziinyawo ezikwere ezingama-3,300,000. Ukongeza kwiivenkile ezinkulu, i-compond ibamba ihotele eneenkwenkwezi ezintlanu, indawo ephindaphindayo, indawo enomlinganiso kunye nenqaba yokuhlala.
I-Hilton Astana, ihotele ekumgangatho ophezulu kumboniso wexesha elizayo we-EXPO-2017. Yonwabela inqanaba eliphezulu lenkonzo ngelixa ulapha kunye nezinto ezinomdla ezinjenge-spa yezempilo, ibha eluphahleni, iziko lokuzilolonga, ichibi elingaphakathi, iLounge eLawulayo kunye nezixhobo zenkomfa. Kuphakathi kwemunites yeziko ledolophu, iiofisi zokudibanisa, uRhulumente wamasebe aseKazakhstan kunye neearhente, kunye neAustana International Airport.
Ngaba ungathanda ukunxibelelana nathi
Sixelele nje iimfuno zakho, singenza ngaphezulu kunokuba unokucinga